Sahamo caadi ah ayaa caajis u ah kaqeybgalayaasha; taas oo isbedeli karta, waana inay isbeddeshaa.
Illaa iyo hadda, waxaan idiin sheegayaa habab cusub oo lagu waydiin karo in ay fududeeyeen wareysiyada kombiyuutarada. Si kastaba ha ahaatee, hal dhibic oo wareysiyo kumbiyuutar ah oo la maamulo ayaa ah in aysan jirin wareysi qofeed si uu uga caawiyo soo-galka iyo sii wadista ka-qaybgalka. Tani waa dhibaato sababtoo ah baaritaano badan ayaa labadaba qaata waqti dheer iyo caajis. Sidaa darteed, mustaqbalka, naqshadeeyayaasha sahaminta waxay doonayaan in ay naqshadeeyaan kaqaybgalayaashooda ayna sameeyaan habka looga jawaabo su'aalaha xiiso leh iyo ciyaarta sida. Nidaamkan waxaa mararka qaarkood loo yaqaan ' gami' .
Si aad u muujiso waxa sahan xiiso leh u muuqan karto, aynu ka fekereyno Friendsense, sahan lagu soo bandhigay cayaar ahaan Facebook. Sharad Goel, Winter Mason, iyo Duncan Watts (2010) rabeen in ay qiyaasaan inta ay dadku u maleynayaan inay yihiin sida asxaabtooda iyo inta ay dhab ahaantii jecel yihiin asxaabtooda. Su'aashani waxay la mid tahay aragtida dhabta ah ee la dareemayo oo si toos ah u yeesha awoodda dadka si ay si sax ah u fahmaan jawigooda bulshadeed iyo waxa ay saameyn ku yeelanayaan siyaasadaynta siyaasadeed iyo isbedelka isbeddelka bulshada. Xeelad ahaan, isbarbardhigga dhabta ah ee muuqaalku waa mid sahlan oo lagu cabbiro. Cilmi baadhayaashu waxay waydiisan karaan dad badan oo ku saabsan ra'yigooda kadibna waydiisanayaan asxaabtooda fikradahooda (tani waxay u oggolaaneysaa cabirida heshiiska aqbalida dhabta ah), waxayna waydiisan karaan dad badan in ay qiyaasaan habdhaqanka asxaabtooda (tani waxay u oggolaaneysaa qiyaasta heshiiska dhexdhexaadinta ). Nasiib darro, waa mid si tartiib ah u adagtahay in la wareysto labadaba jawaab-celiye iyo asxaabteeda. Sidaa darteed, Goel iyo asxaabtooyu waxay sahamintooda u soo jeesteen codsi Facebook ah oo xiiso leh inay ciyaaraan.
Kadib ka-qaybgalayaashu waxay ogolaadeen in ay ku jiraan daraasad cilmi-baaris ah, app wuxuu doortay saaxiib ka mid ah akhristaha Facebook ee jawaab-celiyaha oo waydiiyay su'aasha ku saabsan dabeecada saaxiibkaa (sawirka 3.11). Isku-dubarid su'aalo ku saabsan asxaabtii la doortay ee la doortay, jawaab-celiyaha ayaa sidoo kale ka jawaabay su'aalo ku saabsan naftiisa. Kadib markaad ka jawaabto su'aasha ku saabsan saaxiib, jawaab-celiye ayaa loo sheegay in jawaabteedu ay sax ahayd ama, haddii saaxiibkeed aysan ka jawaabin, jawaabuhu wuxuu awood u yeeshay inuu ku dhiirigeliyo saaxiibkay inuu ka qayb qaato. Sidaa darteed, sahanku wuxuu ku faafaa qayb ahaan iyada oo loo marayo qorista fayraska.
Jaantuska 3.11: Isku xirka daraasad saaxiibtinimo ah (Goel, Mason, and Watts 2010) . Cilmi-baadhayaashu waxay soo jeesteen sahaminta heerka caadiga ah iyagoo ku soo maray waayo-aragnimo xiiso leh oo la mid ah ciyaarta. Codsiga wuxuu weydiiyay ka qaybqaatayaasha su'aalo halis ah iyo su'aalo badan oo lakulmay, sida midda lagu muujiyay sawirkan. Wejiyada saaxiibbada ayaa si ula kac ah u burqan. Waxaa dib loo soo saaray fasax Sharad Goel.
Su'aalaha dabeecada waxaa laga soo qaatay Baaritaanka Guud ee Bulshada. Tusaale ahaan, "[saaxiibkaaga] miyuu dadka reer Israel ka barbar-dhigayaa in ka badan Falastiin ee ku sugan xaaladda Bariga Dhexe?" Iyo "Miyaad [saaxiibkaa] ku siinaysaa canshuur ka sareeya xukuumadda si ay u bixiso daryeel caafimaad oo guud?" , cilmi-baarayaashu waxay isku dhafan yihiin su'aalo lakabsan: "Miyuu jeclaan lahaa [saaxiibkaa] in khamri lagu cabbo khamriga?" iyo "Miyaad [saaxiibkaa] ka dhigan tahay awoodda akhrinta maskaxda halkii awoodda aad u duuli lahayd?" geeddi-socodka aad ugu raaxaysatay ka-qayb-galayaasha iyo sidoo kale awood u yeeshay isbarbardhiga xiisaha leh: Heshiiska miyirka wuxuu la mid yahay su'aalaha siyaasadeed ee culus iyo su'aalaha muraayadaha leh ee ku saabsan cabitaanka iyo awoodda badan?
Waxaa jiray saddex natiijo oo muhiim ah oo laga helay daraasaddan. Marka hore, asxaabtu waxay u badan tahay inay siiyaan jawaab isku mid ah dadka ajnebiga ah, xitaa xitaa saaxiibada ayaa weli ku khilaafsan 30% su'aalaha. Marka labaad, jawaabeyaasha waxay ku qanciyeen heshiiskooda asxaabtooda. Si kale haddii loo dhigo, badi fikradaha kala duwan ee u dhaxeeya saaxiibada lama ogaan. Ugu dambeyntii, ka qaybqaatayaashu waxay u muuqdaan inay ka warqabaan khilaafka asxaabtooda ku saabsan arimaha khatarta ah ee siyaasadda sida arrimaha la xiriira ee ku saabsan khamriga iyo awooda badan.
Inkastoo barnaamijka nasiib daro heli karo in uu ciyaaro, waxay ahayd tusaale wanaagsan oo ah sida cilmi-baarayaashu ay u soo jiidan karaan cabiraad caadi ah oo wax lagu farxo ah. Guud ahaan, iyadoo la abuurayo qaar ka mid ah hal-abuurka iyo shaqo-naqshadeynta, waxaa suurtogal ah in la hagaajiyo waayo-aragnimada isticmaalaha dadka ka-qaybgalayaasha sahanka Sidaa darteed, marka xigta waxaad diyaarineysaa sahan, qaado waqti aad kaga fekereyso waxa aad sameyn kartid si aad uga dhigto khibrada kaaga qaybgalayaashaada. Qaarkood waxay ka baqi doonaan in tallaabooyinkan u socdaan cayaartu ay dhaawici karto tayada xogta, laakiin waxaan u maleynayaa in ka qaybgalayaasha caajisku khatar weyn u yihiin tayada xogta.
Shaqada Goel iyo asxaabtu waxay sidoo kale muujineysaa mawduuca qaybta soo socota: isku xiridda sahammada illaha xogta waaweyn. Xaaladdan oo kale, iyada oo la xidhiidha sahankooda Facebook, cilmi-baarayaashu waxay si toos ah u heleen liiska saaxiibada ka qaybgalayaasha. Qeybta soo socota, waxaan tixgelin doonaa xiriirka ka dhexeeya baaritaanyada iyo ilaha xogta ee faahfaahsan.